जापानी स्पर्शको साथ शानदार रूसी सलाद | ThermoRecines
सुरूवात290 मिनेट6 व्यक्ति250२ क्यालोरी
स्वादिष्ट, तपाईंले यसलाई प्रयास गर्नुपर्नेछ !! छ एक जापानी स्पर्श संग रूसी सलाद यो दर्शनीय छ। यो स्वाद र बारीक भरिएको छ। हामी यसलाई क्लासिक रूसी सलादबाट बनाउने छौं जसमा हामी चावलको भिनेगर, जापानी मेयोनेज, सोया सॉस र नोरी समुद्री शैवालको साथ जापानी खानाको केही साना टचहरू थप्नेछौं।
नुरी समुद्री शैवालका लागि तपाईले कुनै पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ nori समुद्री शैवाल क्षुधावर्धक। मैले यसलाई सुपरमार्केटमा खरिद गरें (मर्काडोना, विशेष रूपमा), तर अब तपाईं सुपरमार्केट वा हर्बलिस्टहरूमा नुरी समुद्री शैवालले बनाएका स्वस्थ स्न्याक विकल्पहरूको धेरै पाउन सक्नुहुन्छ। खास गरी मेरा खानाहरू न्युरी समुद्री शैवालका खस्ता चीजहरू छन् जसमा चामलको नुन स्वाद र हल्का मीठा मीठा छ। तिनीहरू सुपर उत्सुक छन्। र यदि होईन भने, nori समुद्री शैवाल जुन तपाईले आफ्नो हातले सीधा भाँच्नु भन्दा पहिले तपाईको सेवा गर्नु पनी अपूर्व रूपले तपाईको सेवा गर्दछ।
La जापानी मेयोनेज यो एक सुपर विशेष टचको साथ मेयोनेस हो, मलाई यो मनपर्दछ। म तपाईंलाई नुस्खा छोड्दछु ताकि तपाईं यसलाई एक क्षणमा घरमा तयार गर्न सक्नुहुनेछ: थर्मोमिक्सको साथ जापानी मेयोनेस। यसमा सोया, चामलको सिरका र सरसोंको केही हल्का बारीकाहरू छन् जसले यसलाई अपूरणीय बनाउँछ! म तिमीलाई छोडछु दुई चालहरू यदि तपाईं यसलाई होममेड बनाउन चाहनुहुन्न: तपाईं यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय खाद्य क्षेत्र वा एशियाली खाना पसलहरूमा सुपरमार्केटमा किन्न सक्नुहुनेछ। अर्को विकल्प भनेको नियमित क्यानोनेज लिनु हो, तपाईंसँग घरमा जे भए पनि, र एक चम्मच तोरी, चामलको सिरका, चिनी, निम्बू र सोया। शानदार, तपाईं देख्नुहुनेछ!
यो एक सजिलो विधि हो, यद्यपि तपाईंले तरकारीहरू पकाउनुपर्दछ र तिनीहरूलाई चिसो पार्नुहोस् र त्यसपछि तिनीहरूलाई काट्नुहोस् र लुगाफाटा, र अन्तमा, तिनीहरूलाई अलिकता आराम गर्न दिनुहोस् ताकि तिनीहरूले थप स्वाद लिन सकुन् ... अन्तमा यो एक हो आगाडि तयार पार्ने विधि। तर यो तयार गर्न धेरै सहज र सहज छ, तपाईं देख्नुहुनेछ।
1 एक जापानी स्पर्श संग रूसी सलाद
जापानी स्पर्शको साथ यो रूसी सलाद नेत्रहीन छ। यो स्वाद र बारीक भरिएको छ। हामी यसलाई क्लासिक रूसी सलादबाट बनाउने छौं जसमा हामी चामलको भिनगर, जापानी मेयोनेज, सोया सॉस र नोरी समुद्री शैवाल सहित जापानी खानाको केही सानो टच थप्नेछौं।
Skin ठूला आलु छालाको साथ, आधा र राम्रोसँग धोइन्छ
१ गाजर, खुली
२ पूर्ण अण्डाहरू, राम्रोसँग धोइदिए
टुक्राहरूमा 100 ग्राम पकाइएको ह्याम
चामल सिरका table चम्मच
Table चम्मच सोया सॉस
जापानी मेयोनेज (तपाईंसँग माथि विधि छ, परिचयमा)
nori समुद्री शैवाल क्षुधावर्धक
हामीले थर्मोमिक्समा पानीलाई थोरै नुन र टोकरी राख्यौं। टोकरी भित्र हामी आलु र अण्डा राख्छौं र गिलास बन्द गर्दछौं। भेरोमा कन्टेनरमा हामी गाजर राख्छौं।
हामी प्रोग्राम १ minutes मिनेट, भेरोमा तापमान, गति १। हामी जाँच गर्दछौं कि उनीहरू पहिले नै चक्कुको छेउमा पकाइएको छ।
आधा समय हामी टोकरी र गाजरबाट अण्डाहरू हटाउँछौं (हामी जाँच गर्छौं कि ती पहिले नै कोमल छन्) र रिजर्भ गर्नुहोस्।
जब आलुहरू चिसो हुन्छ, छील र काट्नुहोस्। हामी पनि गाजरसँग त्यस्तै गर्छौं। हामी एउटा कचौरामा राख्छौं। हामी स्वादमा नुन थप्दछौं।
हामी अण्डाहरू ताछ्दछौं, तिनीहरूलाई काट्नुहोस् र थप गर्नुहोस्। हामी योर्क ह्याम पनि थप्छौं।
सुशी सिरका र सोया सॉस जोड्नुहोस् र राम्रोसँग चलाउनुहोस्। जापानी मेयोनेजको २ हिपिंग टेबलस्पून थप्नुहोस्, फेरि हलचल गर्नुहोस् र यसलाई फ्रिजमा आराम गर्न दिनुहोस्, राम्रोसँग कभर गरिएको, कम्तिमा2घण्टाको लागि।
हामी मेयोनेज फ्रिजबाट बाहिर निकाल्छौं र हलचल गर्दछौं।
हामी सेवा दिन्छौं: हामी छानिएको कन्टेनरमा सलाद राख्छौं, हामी माथि केही नुन फ्लाक्सहरू र थोरै मेयोनेज थप्दछौं। नुरी समुद्री शैवाल एपेटाइजरसँग छर्कनुहोस् र रमाउनुहोस्!
अन्य रेसिपीहरू पत्ता लगाउनुहोस्: अन्तर्राष्ट्रिय भान्छा, सलाद र तरकारीहरू, गर्मी रेसिपी
लेखको पूर्ण मार्ग: थर्मोरसेटास » सामान्य » अन्तर्राष्ट्रिय भान्छा » एक जापानी स्पर्श संग रूसी सलाद
मौसमी फलको साथ बेक गरिएको मिठाई